5 Best Cities kuzoshanyira For Thanksgiving In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Best Cities kuzoshanyira For Thanksgiving In Europe
Thanksgiving agara ari chinyakare chaizvo zororo wokurarama kumativi mhuri, Teki, uye nhabvu. zvisinei, avo pakati penyu vanofarira kufamba uye aigona kushandisa nokukurumidza uchapukunyuka vanofanira kufunga kushandisa gore rino yezororo rimwe izvi Best Cities kuti Kushanya kuti Thanksgiving mu Europe.
The kondinendi wekare rine Best Cities kuti Visit nokuda Thanksgiving. Kunyange zvazvo kondinendi yose Europe zvinoorora, chete vakasarudzwa vaviri mumaguta zvechokwadi nakisisa kushanya nokuti Thanksgiving.
Europe Kazhinji rakawandisa kuvashanyi, asi mumwe havagoni kutaura zvakafanana kuti mukupera November. Ndokusaka chikamu ichi gore ndiyo nguva yakakwana kushanyira maguta ekare uye recreate Thanksgiving tsika zvokudya kukuru uye dzinokatyamadza nokuwa mavara.
Ungave uri American kana European, zvinotevera pamazita maguta zvinofanira kuva zvako pamusoro dzakasiyana pamusoro uye kumativi Thanksgiving.
Kuti Tanga rwendo rwedu Best Cities kuti Kushanya nokuti Thanksgiving isu vakanonga – kushandiswa, Bherujiyamu
Kuti akariisa pfupi, Bruges ndiro mashiripiti guta chairo kuuya ngaatarire kubva vamwe makumi fairytale. zvinotarisirwa, guta wekare ndiyo apo vose runako nhema. Inouya ngaatarire kubva Medieval yaitonga, uye pano uchawana zvakawanda zvivako yekare uye mesmerizing.
Unogona kutora chikepe kukwira kuburikidza migero shamisa reguta uye kuramba achishamisika zvachose muzvivako mashizha akafukidzwa. Chii chimwe, nokuti November, zvose anotarira zvimwe dreamlike nokuda ose akanaka kuwa mavara.
Haukwanisi kuenda chakaipa nokushanyira Bruges kuti Thanksgiving mu Europe. Unogona kunyange kusvetukira chitima muguta rino kuti wose ruzivo yokuwedzera incredible! uye isu tiri chokwadi mangoti wapedza yenyu pazororo, uchava kugoverana ichi 5 Best Cities kuzoshanyira kuti Thanksgiving muEurope Blog romukova.
ReRotterdam kuna Bruges Zvitima
Utrecht kuna Bruges Zvitima
The Hague kuna Bruges Zvitima
Norway ari kure muchando kuchamhembe, asi Oslo ndiye Sezvineiwo muna wokumaodzanyemba dzenyika. Guta kuenda wakakwana vaya vanoda kuchitonhora kudai asi hazvigoni kutora sekubvunda chikosoro muNorway.
Oslo zvechokwadi mukare muchikamu chino gore nokuda vose kudonha kwemashiripiti girl. Plus, unokwanisa kuona Northern Lights izvo zvakanakisisa zvinoonekwa munyika ino, saka chii chaigona munhu vanoda?
Unogona kuwana chinyakare Thanksgiving mhando zvokudya uri kushandiswa, asi ruzivo unokwanisa kuva kunopfuura zviripo. Kunyange zvazvo Muterere hakusi siyana sezvo iwe unenge uchida, ari vomuNorway vachiri yakawanda inonakidza kudya kupa. Semuyenzaniso, pashure chinhu zvetsika Norwegian Hotdog. zvisinei, zviri yakabikwa nyama Nehunde uye akaputirwa lefse, mumwe flatbread neupfu, mbatatisi, uye mukaka.
Kubva hunoshamisa ruzhinji mumapaki uye vakwegura nhare kuna Viking mamiziyamu, uchava kuva Mugove kuita muOslo. Tine chokwadi chokuti uchaita kuda kupedza kupfuura mazuva mashomanana muguta rino zvikuru.
Oslo ndiye redu zvikuru rwokumusoro Sarudza kuti 5 Best Cities kuzoshanyira kuti Thanksgiving mu Europe.
London, nyika dzakabatana
Hazviiti tisangosiya London. Munhu wose akanzwa nezvazvo, uye vose anodzida. Chii kunyange nani, iwe uchawira norudo nawo kuwa. The guta riri hombe, asi ari uko offseason ndiyo nguva yakakwana kushanyira vamwe kazhinji ungana nzvimbo.
Zvizhinji zviitiko kuitika panguva ino yegore, saka kana uri munhu mabasa feni, uchaita kuda London. Mukuwedzera, ari mumapaki mu mumatsutso vanopfuura zvinoshamisa. Kensington Gardens, Greenwich Park, uye Windsor Great Park zvimwe vazhinji hunhu matenga iwe unenge uchida kushanyira.
Vaya iwe kuti funga chikafu kuti chinhu chinokosha Thanksgiving, uchava kwenyu kwakanaka mugove muLondon. Zvokudya Chiitiko pano zvinoorora uye sezvo dzakasiyana souya musana mumaguta makuru ari inoti. Kuchava chinhu nokuda wose kuravira.
The yakanakisisa chikamu pamusoro kuenda kuLondon ndechokuti pane zvakawanda akakurumbira chitima mitsetse kuti ndibve Continental Europe kuLondon, sezvinoita vaya kubva Amsterdam, Paris, uye Berlin, zvose izvo chipiriso kwazvo ruzivo dzinoyevedza mumaruwa uye achipfuura Eurotunnel pasi Chirungu Channel kana sezvo French kumutumidza - La Manche.
Imi munoziva pamusoro Siwizarendi, uye mashiripiti makomo, asi iwe Ungangove usina kunzwa pamusoro Lugano. Chinhu guta Vakamupfekedza riri kumaodzanyemba Switzerland, pedyo nomuganhu Italy.
The guta riri pamhenderekedzo ine mesmerizingly mutema gungwa iri pasi Alps, izvo zvinoita anenge mashiripiti. kuti chokwadi oga inofanira kuva zvakakwana kuti imi muve Thanksgiving wenyu Europe ipapo, Lugano ndiye redu zvikuru nedzimwe Sarudza muna Best Cities kuna Visit nokuda Thanksgiving.
Uyezve, vachienda nokudzoka guta rino Via chitima chinhu unoshamisa ruzivo pamusoro yayo. zvimwe Ndiyo nzira yakanakisisa kunakirwa runako chimwe chezvinhu zvinoshamisa kumatunhu Europe. Mukuwedzera, uchaita kunakidzwa rwendo nokuda naka nezvitima pachavo, sezvo neSwiss vane mumwe vakawanda yepamusoro nezvitima mu Europe.
MuBasel kuna Lugano Zvitima
Bern kuna Lugano Zvitima
Lucerne kuna Lugano Zvitima
Zurich kuna Lugano Zvitima
Hatigoni mari tisangosiya guta husingaperi vezviedza. Paris anogara ndeimwe dzakashanyira maguta munyika nokuda chikonzero. zvisinei, zviri kazhinji nzira zvakare yakatsvikinyidzana ndokusaka kunonoka November ndiyo nguva yakakwana kushanyira. Plus, hamungambovi nepfungwa spellbinding kuwa mavara.
Chii chimwe, Paris muna November ari paradhiso nokuda Instagramers. hamungambovi kukonesa nokutora mifananidzo paunenge uri pano. Zvisingapfuure, kuti kuchaita kuti muwane rwendo izvo uchava kurangarira nokusingaperi.
Kana chikafu, tsime, munoziva zviri muFrance; uye kunze, Paris ndiye gastronomic guta guru munyika. Recreating munhu Thanksgiving Saka nyore chaizvo, uye uchafarirwa. mukana add kugabhuka pazviri. hamungambovi kuita kuti kumwewo. chete Paris anogona kupa zvokudya uye nzvimbo dzinoyevedza kuti zvichaita astonish kunyange pickiest mufambi.
Chinhu bedzi anogona kunatsiridza kuti ushingi kuti kubata chitima vafambe kumaruwa French. Richava yakanaka ruzivo!
Shandisa Yakanakisisa Thanksgiving ari Best Cities kuti Kushanya kuti Thanksgiving mu Europe
Tinogona kuenda uye kutaura pamusoro maguta aya. Mukuwedzera, tinogona nezvamai dzimwe nzvimbo kuti nemiwo vakakodzera wako patronage kumativi Thanksgiving. The yose Bavarian mudunhu Jerimani, ari Kuchamhembe Italy pamwe Milan kunyanya, Scotland, uye zvakawanda. Thanksgiving muEurope kunogona kuva chiitiko chisingakanganwiki chero nzvimbo idzi.
Pose ukasarudza kuenda pakupedzisira, unofanira kufunga achifamba nechitima. Kufanana takati akawanda nguva, dzimwe nzvimbo izvi kuchaita haana kukupai zvechokwadi wakakwana ruzivo kana iwe kuvashanyira rails. Chete nzira ichaita Ungakwanisa kuona mashiripiti kuti Europe zvechokwadi. Contact Save A Train kuti matikiti ako nekukurumidza nokuti Thanksgiving Dzava pano!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-cities-visit-thanksgiving-europe/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / kuti / of kana / ja uye mimwe mitauro.
europetravel London longtrainjourneys Thanksgiving Train Travel chitima rwendo travelbelgium travelfrance travelnorway travelswitzerland